गोरखाको दशैं सस्तो बजार मेलामा च्याङ्ग्रा बिक्री सुरु | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
गोरखाको दशैं सस्तो बजार मेलामा च्याङ्ग्रा बिक्री सुरु
Published On : १५ आश्विन २०७६, बुधबार ०८:१७
गोरखा सदरमुकाममा जारी दोस्रो दशैं सस्तो वजार मेलामा मुस्ताङबाट ल्याइएको भेडा च्याङ्ग्राको बिक्री सुरु भएको छ । ज्यूँदो च्याङ्ग्रा प्रतिकिलो सात सय रुपैयाँको दरले बिक्री भैरहेको आयोजक गोरखा चेम्वर अफ कमर्शले जनाएको छ ।
दशैंको बेला खसिबोकासँगै गोरखामा च्याङ्ग्राको माग पनि बढ्दै गएको छ । त्यसैले मुस्ताङ पुगेर ल्याइएको च्याङ्ग्रा उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा बिक्री भैरहेको गोरखा चेम्वर अफ कमर्शका अध्यक्ष भाइचन्द्र श्रेष्ठले बताए । मेलामा पोखरामा भन्दा सस्तो मूल्यमा च्याङ्ग्रा बिक्री गरिएको उनको दावी छ ।
दशैंमा उपभोक्ताले अत्यधिक मात्रामा खरीद गर्ने सामग्री सस्तो मूल्यमा एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउने उदेश्यले गोरखा चेम्वर अफ कमर्शले दशैं सस्तो वजार मेला गरेको हो । असोज ८ गतेबाट सुरु भएको मेलामा हालसम्म चार करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भैसकेको आयोजकले जनाएको छ । छैटौं दिनसम्ममा करीव ४० हजार दर्शकले मेला अवलोकन गरेका छन् । असोज १७ गते सकिने मेलाको अवसरमा विभिन्न साँस्कृतिक र साँगीतिक कार्यक्रम पनि भैरहेको छ ।
मंगलबार लोक तथा दोहोरी गायक दिपक खड्का, रमेशराज भट्टराई, बिन्दू परियार, सरु थापा, अविरल मगर र धादिङकी ११ वर्षकी गायिका कमला घिमिरेले साँगीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । बुधबार लोक दोहोरी गायक बद्री पंगेनी, सागर गुरुङ, रवि रिमाल, सुमित्रा तामाङ लगायतको प्रस्तुति रहने गोरखा चेम्वर अफ कमर्शका सदस्य गणेश श्रेष्ठले बताए ।